Wednesday February 19, 2020 - 08:21:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo saaka aroortii hore ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose.
Dagaal lagu daah furay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis hure ah ayaa ka dhacay saldhigga maleeshiyaadka dowladda ee deegaanka Ceelsaliini duleedka magaalada Marka.
Ciidamada Al Shabaab ayay usuurta gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta saldhigga Ceelsaliini waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday ciidamadii dowladda ee halkaas ku sugnaa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay dagaalka ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo saanado melleteri oo maleeshiyaadka dowladda uyiillay saldhigga Ceel Saliini.
Sidoo kale dagaal saacado badan qaatay kadib ayay ciidamada mujaahidiinta ugu suurtagashay in ay la wareegaan gacan ku haynta degmada Qoryooleey ee Sh/Hoose.
illaa laba qarax ayaa lagu beegsaday saldhigyada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee Qoryooleey kadibna dagaalyahanno aad u hubaysan ayaa weerar toos ah qaaday.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ay arkayeen dagaalyahannada Al Shabaab oo isku fidinaya xaafadaha degmada Qoryooleey, saraakiil katirsan 'Mujaahidiinta' ayaa fagaarayaal ugu muxaadareeyay shacabka kadib markii ay la wareegeen inta badan xaafadaha magaalada.
Ciidamada AMISOM ee saldhigga ku leh deegaanka Mashallaay ayaa dagaalka madaafiicda goobta uga qeyb qaadanayay kadib markii ay weerar xooggan kala kulmeen xoogaga Al Shabaab.
Jugta madaafiic iyo rasaas ayaa saaka aroortii laga maqlayay deegaanno badan oo katirsan Sh/Hoose, illaa iyo hadda tira koob rasmi ah lagama hayo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM kasoo gaaray dagaalladii maanta dhacay.